Fikarohana an’i Arnaud sy Annie : Mampiaka-peo ireo mpandraharaha tanora ao Toamasina – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2015 → décembre → 21 → Fikarohana an’i Arnaud sy Annie : Mampiaka-peo ireo mpandraharaha tanora ao Toamasina
“Mpalahelo ny zava-misy amin’ny fanagejan’ireo jiolahy ny zanaka mpandraharaha eto Toamasina io. Saingy ny olana dia ny fisamborana sy fanagagadra mpandraharaha tanora, izay atao tondro molotra fotsiny, satria hoe manam-bola?”, izay no nambaran’ireto mpandraharaha tanora nilaza ny heviny mikasika ny zava-misy ao Toamasina, ao anatin’ny fikarohana an’i Arnaud sy Annie.
Ho azy ireto dia tiana hopotehina sy hosimbaina avokoa ireo mpandraharaha tanora miezaka amin’ny fiainana, ka heverina fa “jiolahy” sy “mpanao fakana an-keriny” avokoa izy ireo. Raha ny tarehimarika eo anivon’ny fampanoavana dia miisa 22 eo ireo olona nosamborina momba ity raharaha fakana an-keriny ity. Ny 09 amin’ireo, araka ny tarehimarika eo anivon’ny fonja, no miandry fitsarana any am-ponja, raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa ireo olona miisa 13. Tahaka ity mpandraharaha mpiasa eo anivon’ny fadintseranana ity, izay tompon’ny trano fandraisam-bahiny “Benintsara plus” Ivoloina.
Noafahan’ny fampanoavana ny tenany ny zoma teo raha niakatra teo anivon’ny tonia mpampanoa lalana, ny fampiantranoana andramena ana mpandraharaha tanora ihany koa, izay misy taratasy ara-panjakana ara-dalàna vita sonian’ireo tompon’andraikitry ny ala sy tontolo iainana sy ny fitsarana tao Toamasina ny taona 2010; sy mikasika ireo voalaza fa “nickel” izay voaporofo, araka ny fitiliana nataon’Ambatovy, fa firaka entina hanamboarana harato ho fampihodinana ilay trano fandraisam-bahiny ao Ivoloina noho izy amoron-drano sy amoron-dranomasina, amin’ny alalan’ny hazandrano.
Ny tsikaritra ihany koa, araka ny angom-baovao natao tamin’ny fianakavin’ireo efa miandry fitsarana any am-ponja noho ity raharaha fakana an-keriny ity, dia ahitana ratra avokoa izy ireo ka ny faritry ny tendany sy ny tratrany ary ny ratsam-batany no tena ahitana ireo ratra ireo, izay tahaky ny notadiana sy nodorana ary nampandadiana izany ny fitrangan’ireo ratra misy. Koa mitaraina ny mba hijeren’ny fitsarana ny trangan-javatra toy izany ireo nanangonana ny vaovao, satria mbola voarohirohy izy ireo fa tsy voasazy.
Nomarihan’ireto mpandraharaha tanora atao hazalambo soketaina ho jiolahy ireto, ny ho vokatra izany amin’ny orinasa kelin’izy ireo sy ny fandraharahana ataony izay mamelona olona an-jatony. Eo koa ny mety hisian’ny fitroarana ho azy ireo, izay iniana potehina sy simbaina tanteraka ny ho aviny sy ny fianakaviany anefa. Ireo ankizy karohina anefa tsy mety hitan’ireo mpitandro filaminana nafarana manokana akory.